स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा, जिल्ला अस्पतालको सेवा ठप्प « Naya Page
स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा, जिल्ला अस्पतालको सेवा ठप्प
बारा, २८ पुस । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बाराको कलैयास्थित जिल्ला अस्पतालको सबै सेवा ठप्प भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीमा खटिए बापतको जोखिम भत्ता नपाएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले मंलबारदेखि अस्पतालमा धर्ना दिँदै आकस्मिक उपचार बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गरेका छन् । सरकारले कोभिड १९ महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले बैशाखमा जारी गरेको कोभिड–१९ महामारीमा कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार कोभिड महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, सफाइकर्मीलाई तलबको केही प्रतिशत जोखिम भत्ता दिइने भनिएको छ ।
तर कलैया जिल्ला अस्पतालका स्वस्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारी गरी उक्त जोखिम भता नपाएपछि धर्ना र अस्पतालका सेवा ठप्प गरेर आन्दोलन शुरु हुन् । अस्पताल प्रशासनको आलटाल र लापरवाहीका कारण कोभिड–१९ मा खटे बापतको जोखिम भता अहिलेसम्म पनि नपाएकाले अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन शुरु गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
पटक–पटक अस्पताल प्रशासनलाई जोखिम भता उपलब्ध गराइदिन हारगुहार गरे पनि अस्पतालले चाँसो नदेखाएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको कलैया अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. रविरोशन गुप्ताले बताएका छन् ।
उनले भने ,‘ भत्ताका लागि हामीले पटक पटक मौखिक आग्रह सम्बन्धित निकायमा गरेका थियौं, पुष २६ गते लिखित ज्ञापनपत्र नै मेसुलाई बुझाएका थियौ , तर हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन अनि बाध्य भएर अब आन्दोलनमै उत्रिएका हौं ।’
जोखिम भत्ता नपाएसम्म अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनलाइ जारी राख्ने उनले बताए । आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका अनुसार कोभिड जोखिम भत्ता बापत उनीहरुले करिब ९० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कलैया जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. सुनिल कुशवाहाले भने जोखिम भताको रकम मन्त्रालयबाटै नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ’ म पनि भर्खर सरुवा भएर यहा आएको छु , अहिलेसम्म माथिल्लो निकायबाट भत्ताको रकम आएको छैन, अब यसबारेमा पहल गर्छु ।